Mampiditra ny teny Laz an-tserasera, tetikasa indray manao: antsafa nifanaovana tamin’i Eylem kertanci · Global Voices teny Malagasy
Ampiasaina ny aterineto ho fitaovana hampiroboroboana ny fiteny Laz
Voadika ny 28 Jona 2021 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, Esperanto , English, English
Rize, Torkia. Sary nalaina avy amin'ny https://www.youtube.com/watch?v=feXQb1HV024
Iray amin'ny fiteny miisa 30 vitsy an'isa any Torkia ary iray amin'ny fiteny tandindomin-doza indrindra ny fiteny Laz, na Lazuri.
Raha ny loharanom-baovao samihafa dia mety misy eo anelanelan'ny 30.000 ka hatramin'ny 200.000 eo ny mpampiasa ny teny Laz ankehitriny, ary mbola mipetraka amin'ny tanàndehibe sy tananakely any Artvin sy Rize, amoron'ny Ranomasina Mainty ny ankamaroan'izy ireo. Nifindra monina avy tany amin'ny faritra Batumi nankany Marmara tamin'ny taonjato faha-19 ihany koa ny maro tamin'izy ireo, taorian'ny Ady Ottoman-Rosiana.
Nanomboka tamin'ny taona 1982 ka hatramin'ny faran'ny taompolo 1990 dia norarana tsy hampiasaina any amin'ny sekoly Tiorka ny fiteny vitsy an'isa rehetra, izay nanakana ny fampiasana ny Laz.
Na dia misy lalàna tamin'ny 2002 aza mamela ny fampianarana amin'ny fiteny vitsy an'isa ampiasain'ny olom-pirenena Tiorka any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, dia mbola vitsy ny mpampianatra, ary sekoly maro no manakana ny mpianatra tsy hanohy ny fianarana toy izany.
Niresahan'ny Global Voices i Eylem Bostancı, mpandrindra ny tetikasa ao amin'ny Ivontoerana Laz , fikambanana iray any Istanbul natokana hampiroboroboana ny fiteny sy ny kolontsaina Laz.
Avy amin'ny foko Laz i Botancı saingy nihalehibe tany Londres. Nanomboka 20 taona lasa izay ny diany nitrandraka ny fiaviany, rehefa nahita tranonkala iray nahitany olona Laz hafa.
Ny taona manaraka, nandika teny boky tamin'ny fiteny Lazuri ho amin'ny teny Anglisy i Bostancı, anisan'izany ny boky fitsipi-pitenenana sy ny rakibolana Laz-Tiorka-Anglisy, ary nanampy tamin'ny famoahana gazetiboky tamin'ny fiteny Lazuri.
Nasiam-panovana mba fohifohy ity antsafa ity.
Doğa Çelik (DÇ) : Ahoana no nampitomboanao ny fahaliananao amin'ny fiteny Laz?
Eylem Bostancı (EB): Avy amin'ny foko Laz aho ary ny Laz no fiteny voalohany samy ampiasain'ireo ray aman-dreniko. Hatramin'ny nitazaina ahy sy nampianarana ahy tany Londres anefa dia nahazo kely ihany fa tsy nahay ny fiteny Laz aho. Ny fiteny Laz no singa iray lehibe amin'ny lovako ara-kolontsaina sy ny fiaviako. Tamin'ny alalàn'ny tranonkala iray no nihaonako tamin'ny olona Laz hafa tamin'ny taona 2001, nanoratako lahatsoratra sy nanaovako fikarohana momba ny Laz tamin'ny fikarohako tao amin'ny arisivan'ny Tranomboky Britanika. Tamin'ny taona 2002, nandray fanapahan-kevitra hentitra aho fa hifindra any Istanbul, Torkia, izay nanambadiako ny vadiko izay olona voalohany namoaka rakibolana Laz-Tiorka tany Torkia.
DÇ : Araka ny hevitrao, aiza ho aiza no misy ny fiteny Laz ao amin'ny aterineto?
EB: Amin'izao fotoana izao, tsy dia misy ny fomba fanabeazana, ny fitaovana ary ny loharanom-pahalalana izay azo idirana amin'ny alàlan'ny aterineto, izay midika fa tsy misy fanohanana ny fanabeazana amin'ireo fiteny ireo. Fitaovam-pifandraisana matanjaka ny aterineto izay manamora ny fidirana malalaka amin'ireo fitaovana sy loharanom-pahalalana rehetra amin'ny fiteny Laz. Tsy mifanaraka amin'ny sehatra nomerika ireo fitaovana nomanina tato anatin'ireo taona faramparany, noho izany dia tsy mora ho an'ny mpisera sady tsy mora idirana ho an'ireo maniry hianatra ilay fiteny. Ao anatin'ity sehatry ny tetikasan'ny Vondrona Eoropeana izay natombokay tamin'ny volana jolay 2020 ity. Hamokatra izahay rakipeo, horonantsary, ary fitaovana fianarana maro vaovao, mora hidirana, miaraka amin'ny sary sy mozika, mba hahafahan'ny ankizy sy ny tanora mianatra ny tenindrazan'izy ireo. Ho fanampin'izay, hatao nomerika ny fitaovam-pianarana efa misy.
DÇ : Araka ny hevitrao , inona no maha-zava-dehibe ny aterineto amin'ny fiarovana ny fiteny Laz?
EB: Tena kitro ifaharana io. Nikarakara fiofanana momba ny “Fikatrohana nomerika” izahay vao haingana, izay nanasana ireo mpampianatra oniversitera sy manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny fikatrohana nomerika amin'ny fiteny tandindonin-doza. Amin'ny alàlan'ny fampiofanana fikatrohana nomerika sy ny fikajiana ireo fiteny ireo no nikendrena ireo tanora liana amin'ny fitehirizana ilay fiteny tandindonin-doza amin'ny maha-teratany miteny ilay fiteny azy ireo, nikendrena ireo mpikatroka na mpikambana amin'ny FTMF hampitombo ny fahefan'ny mpandray anjara ao anatin'ny raharahany tsirairay avy, ary hanampy azy ireo hampiasa ny tambajotra sosialy amin'ny fomba mahomby sy mamokatra. Ny votoatin'ny fanazarana dia ny famoronana ny fitaovana hita maso, ny teknika sy ny fampiharana ny fikatrohana an'horonantsary, ny fampiasana mahomby ny fitaovana nomerika, ny asa fanaovan-gazety ho an'olon-tsotra, ny fitehirizana ny fiteny nomerika mifantoka amin'ny tenindrazana sy ny zo ara-kolontsaina, ny fanomanana vaovao an-tsoratra amin'ny tenindrazana. Amin'ny faran'ity hetsika ity no hanomananay boky torolàlana nomerika natokana ho an'ireo ivontoerana sy mpikatroka manao fandalinana mifototra amin'ny zon'ireo fiteny tandindonin-doza sy ny zo ara-kolontsaina.
DÇ : Manana tetikasa nomerika ve ianareo?
EB: Miasa izahay amin'ny famoronana sehatry ny fampitam-baovao nomerika amin'ny alàlan'ny famoronana votoaty ahitana vaovao mifandraika amin'ny fivoaran'ny fiteny Laz sy ireo fiteny tandindomin-doza hafa any Torkia sy izao tontolo izao, ny fampahalalana momba ny fiteny Laz, ny kolontsaina sy ny tantara, ny fitaovana fianarana, ny sary, ny lahatsoratra , ny horonantsary, ny antsafa ary ny rakipeo. Miasa amin'ny famokarana sariitatra (sarimiaina) amin'ny fiteny Laz ho an'ny ankizy ihany koa izahay. Mitombo haingana ny isan'ireo tanora Laz mizaha ny Ivontoerana Laz hijereny ny momba ny fiteniny sy ny kolontsain'izy ireo mitady ny mari-panondroana ara-poko sy haneho ny fitakiany hivelaran'ny zo ara-kolontsaina sy hanitatra ny fisoloantenan'ny vondron'olona mampiasa ny fiteniny. Miezaka izahay hamaly ny fangatahana mitombo avy amin'ny vahoaka Laz hahamora kokoa ny fidirana amin'ny loharanom-pahalalana amin'ny alàlan'ny famondronana ho ao amin'ny dizitalizasiona. Samy misy vaovao sy loharanom-pitaovana izay novokarinay ny tranokalan'ny Ivontoerana Laz sy ny tranokalan'ny Tad-teny tandindonin-doza izay efa nosokafanay nandritra ny tetikasa farany indrindra novatsian'ny Vondrona Eoropeana vola. Nanokatra kaonty tambajotra sosialy ho an'ny Laz Enstitusu sy Tehlike Altindaki Diller (Fiteny tandindonin-doza) ihany koa izahay tao amin'ny YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ary LinkedIn. Ho fanampin'izay, nangataka ny fampiasa Duolingo izahay tamin'ny volana Mey 2020 mba ho azo amin'ny fiteny Laz izany.
Hosokafanay ihany koa ny tranonkala Rakibolam-peo Laz sy ny “Sarintanin'ny fiteny” Laz sy Circassian. Sarintany an-tserasera hampiseho ireo tanàndehibe, tanàna ary tananakely izay ahitana ny fampiasana ny fiteny Laz sy Circassian any Tiorkia io. Ahitana ny fampahalalana momba ny etnografia, ny isan'ny mponina ary ny anaran'ireo tanàna tany am-boalohany sy ireo tanàna ary ireo anarana vaovao nomen'ny fanjakana izany tao anatin'ny 80 taona. Ity sarintany ity dia hahafahan'ny manampy vaovao, mamela azy ireo hanovana vaovao. Avy amin'izany, ho azo ireo angondrakitra fanisam-bahoaka marina momba ireo fiteny ireo ary ho hita sy mora hidirana ny anaran'ireo toerana novaina. Ho fanampin'izay, miasa ihany koa izahay hisian'ny tranonkala fianarana ny fiteny Laz sy Circassian.
DÇ: Misy olana ve atrehinao amin'ny ezaka ataonao hampiely ny fampiasana ny Lazuri?
Misedra olana vitsivitsy izahay amin'ny fampitana ny vaovao marina amin'ny fiteny Laz. Ohatra, sokajiana tsy ho fiteny manokana ny fiteny Laz/Mingrelian, fa toy ny fitenim-paritra amin'ny fiteny hafa ao amin'ny Wikipedia, ary maro ihany koa ny lahatsoratra akademika no sokajiana ho fiteny “Kartvelian” amin'ny fomba diso, fa tsy atao hoe fiteny “Kaokazy atsimo” fotsiny. Imbetsaka izahay no nanitsy ny vaovao tao amin'ny Wikipedia, saingy novaina indray izy io, ka naha-sarotra izany. Na dia sarotra aza ny manitsy ny vaovao amin'ireo loharanom-pitaovana tsy nomerika efa navoaka dia azo atao ny mifanerasera amin'ireo loharanom-baovao an-tserasera. Eo am-pananganana ny tambajotra “Fandalinana momba ny fitehirizana sy ny fampiroboroboana ny fiteny iraisam-pirenena” izahay izao ary apetraka amin'ireo loharanom-pitaovana amin'ny aterineto ny fifandraisana, hita tany am-piandohan'ny asa fikarohana, ho an'ny fanitsiana ny vaovao ary ny fanomezana ny vaovao marina (miaraka amin'ny loharanom-baovao mifandraika amin'izany) amin'ny fiteny Laz.